कहाँबाट आयाे कति खोप, कति आउन बाँकी ? – Satyapati
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
संसदमा विश्वासको मत पाउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता खोप, खोप र खोप तीन पटक वाचन गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाएमा रोग नियन्त्रण गर्न सकिने र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गत परिवार महाशाखाका निर्देशक डा तारानाथ पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप प्राप्त भइसकेको छ ।
कोभिशिल्ड २४ लाख ४८ हजार, भेरोसेल ५८ लाख र जोनसन एण्ड जाेनसन १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा खोप प्राप्त भएको छ ।
तीमध्ये कोभ्याक्स सुविधामार्फत भारतबाट कोभिशिल्ड तीन लाख ४८ हजार र अमेरिकाबाट जोनसन एण्ड जाेनसन १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा, वैदेशिक अनुदानबाट २९ लाख मात्रा, चीनबाट १८ लाख मात्रा र भारतबाट ११ लाख मात्रा रहेका छन् ।
खोप ल्याएर असोज मसान्तभित्रमा खोप लगाउने लक्ष्य लिएकामध्ये ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइने र चैत मसान्तभित्र सबै लक्षित समूहलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रकम कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा ३५ लाख ४४ हजार ४३ जनाले पहिलो मात्रा र १५ लाख तीन हजार ३१२ जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । रासस
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल, आज सपथ
जागिर पाउन बोससँग डेट, मासिक तलब ८६ लाख !
मृत्युपछि शरीर दान दिने घोषणा गदैँ सत्यमोहन जोशी दम्पती
नेकपा नेता नेपालका ९ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पुष्टि, परिवारका सदस्यहरुको भने नेगेटिभ